Olona iray voalaza fa tsy salama ara-tsaina no nohidiana ny tanany anankiroa, ka mizoga hazo any amin’izay rehetra alehany. Tsy haritro ka nalaiko sary, hoy ny olona nahatsiaro ho tohina manoloana ilay toe-javatra. Raha adala ve ny olona iray dia tsy maninona raha asiana zioga be ohatra an'io ny tanany? Tsy misy fitazonana adala ve eto amintsika na hopitaly afaka mandray an-tanana ny olona manana olana ara-tsaina tahaka izao ? Very zo ve ny adala ka ampitoviana amin’ny biby sanatria tahaka ny alika, liona na voay masika be ny fitondrana azy ? Amiko dia mampalaelo sy tsy rariny satria olombelona izy io, hoy ny fanehoan-kevitra. Tena niteraka adihevitra lehibe tao anatin’ny tambajotran-tserasera moa ity tranga anankiray ity.